Sun City अपार्टमेन्ट भित्रको अवस्था के छ, सेक्युरिटी गार्ड यस्तो भन्छन् ! ८ गतेको चुनावमा सँक्रमित सहित २८५ जना भेला थिए (भिडियो हेर्नुस) – Everest Pati
पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नेमा कोरोना संक्रमण परीक्षण सुरु भएको छ । उक्त अपार्टमेन्टमा बस्ने दुई जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुमा परीक्षण सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरुको ट्रेसिङ पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले मंगलबार फेसबुकमार्फत जानकारी दिएको छ ।
पेप्सीकोला टाउन प्लानिङस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा लण्डनबाट आइ बसेका एकै परिवारका ५८ वर्षका पुरुष र ८१ वर्षकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरुकै परिवारका अर्का एक जनाको पहिलो परीक्षणमा भने कोभिड १९ पोजेटिभ नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा त्यस परिवारको तीनै जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगिएको थियो । अहिले उनीहरुको पाटन अस्पतालमा नै उपचार भइरहेको छ । Sun City भित्रको अवस्था के छ, सेक्युरिटी गार्ड यस्तो भन्छन् ! चुनावमा अर्थमन्त्री पुगेको वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस)